Yekugadzirisa Izwi Chishandiso. Izwi Kudzorera Software. Dzosera DOC & DOCX Mafaira.
DataNumen Word Repair ndiro yakanakisisa Kugadziriswa kweizwi uye chishandiso chekudzosera pasi. Iyo inogona kugadzirisa iyo yakashatiswa kana yakakuvadzwa Izwi doc & docx magwaro uye kudzoreredza yakawanda yedata rako sezvinobvira, nokudaro ichideredza kurasikirwa mufaira yehuori.
4.90 / 5 (kubva 1,631 mavhoti)
Sei DataNumen Word Repair?
Kudzoreredza mwero ndiyo most kukosha kwakakosha kweIzwi rekugadzirisa chigadzirwa. Zvinoenderana nemiedzo yedu yakazara, DataNumen Word Repair ine yakanakisa kupora mwero, zvirinani kupfuura chero vamwe vakwikwidzi mumusika!
Dzidza zvakawanda nezvekuti sei DataNumen Word Repair inoputa kukwikwidza
Ndotenda zvikuru. Chokwadi, yako MS Office faira remukati kupora mhinduro ndiyo yakanyanya kuyedza yandakayedza kusvika zvino.
Landis + Gyr Zimbabwe Sp. z oo
Ini ndaive nefaira rezwi faira raive nezvikanganiso zvekugadzirisa, webhusaiti yako yakagadzirisa izwi refaira mu6 maminetsi.
Izvi zvakasarudzika uye zvakanaka kwazvo.
Fizikisi mainjiniya https://helpwithphysics.com
Oo kunaka kwangu, NDATENDA! Handigoni kutenda kuti iwe wakakwanisa kuzvigadzirisa! Ini ndanyatso kuyedza zvese zvimwe- izvi zvinoshamisa, uye ndizvo zvandiri
Oo kunaka kwangu, NDATENDA! Handigoni kutenda kuti iwe wakakwanisa kuzvigadzirisa! Ini ndanyatso kuyedza zvese zvimwe- izvi zvinoshamisa, uye ndinotenda zvikuru.
Ndinokutendai zvakare nerubatsiro rwenyu! Ndiri kufara kunyora chipupuriro kana iwe uchida imwe- hapana mumwe munhu akagona kugadzirisa izvi !!
Gunyana 16, 2015
Ndinokutendai zvikuru nerubatsiro rwenyu uye kufarira Hamuna kumbove nekuomerwa mune chero nzira.
Ndakagutsikana kwazvo. Ndinokukurudzira kune wese munhu. ndinokushuwira
Ndakagutsikana kwazvo. Ndinokukurudzira kune wese munhu. Ndinoshuva kuti iwe urambe uchibudirira.
Mhinduro Yekutevera Zvakajairika Zvikanganiso Nekuda kweIzwi Gwaro Huori
Iyo Faira xxxx.docx Haigone Kuvhurwa Nekuti Kune Matambudziko Nezviri Mukati
Izwi Rakaona Kanganiso Kuedza Kuvhura Faira
Faira Rekutendeuka Dialog Pop kumusoro paunenge Uvhura Yakashata Izwi Gwaro
Mifananidzo Haigone Kuratidzira Mune Zvakaora Shoko Zvinyorwa
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Word Repair v4.2
Tsigiro yekugadzirisa Microsoft Word 6.0, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 uye Izwi reHofisi 365 zvinyorwa.
Tsamba dzekutsigira dzakagadzirwa neIzwi reWindows uye Mac.
Tsigiro kudzoreredza zvinyorwa, mifananidzo uye fomati mune zvinyorwa zveIzwi.
Tsigiro yekudzosera matafura.
Tsigiro kuti uwanezve mabara ane huwandu kana huwandu.
Tsigiro yekudzosera fomati uye ma hyperlink.
Tsigiro yekudzosera mabhukumaki.
Tsigiro yekuwanazve gwaro reIzwi kubva kutemporary mafaera pakaitika dambudziko redata.
Tsigiro yekugadzirisa mafaira eIzwi uye dxx pane yakashatiswa midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa batch reIzwi doc uye mafaera edxx.
Tsigiro yekutsvaga uye kusarudza zvinyorwa zveIzwi kuti zvigadziriswe pakombuta yemuno.
Tsigira kusangana neWindows Explorer, kuti ugone kugadzirisa faira uye faira reHTMLx nemamiriro acho (kurudyi tinya) menyu yeWindows Explorer zviri nyore.
Tsigiro yekuraira mutsara (DOS kukurumidza) parameter yekugadzirisa mafaira eIzwi.
kushandisa DataNumen Word Repair Kudzoreredza Zvakashatiswa Zvinyorwa zveIzwi
Kana zvinyorwa zvako zveIzwi (* .DOC uye * .DOCX mafaera) zvaora kana kukuvara uye haugone kuvhura zvakajairika, unogona kushandisa DataNumen Word Repair kuverenga mafaira eShoko uye kudzoreredza data rakawanda sezvinobvira.
Ongorora: Usati wadzosera chero rakashata kana rakakanganiswa faira reIzwi ne DataNumen Word Repair, ndapota vhara Microsoft Word uye chero mamwe maapplication anogona kuwana iyo faira reIzwi.
Sarudza iro rakaora kana rakakuvara Izwi .doc / .docx faira kuti igadziriswe.
Unogona kuisa Izwi .doc / .docx zita refaira zvakananga kana tinya iro bhatani rekutarisa uye sarudza iyo faira. Iwe unogona zvakare kudzvanya iyo bhatani kuti uwane iyo faira kuti igadziriswe pakombuta yemuno.
By default, DataNumen Word Repair ichachengetedza iyo yakamisikidzwa Izwi refaira se xxxx_fixed.doc, uko xxxx izita rezvinobva Izwi .doc / .docx faira. Semuenzaniso, yeshoko reIzwi faira Damaged.docx, iro zita rekutanga reiyo yakagadziriswa faira richava Damaged_fixed.doc. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Baya bhatani. DataNumen Word Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa iyo sosi Izwi refaira.
Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekugadzirisa, kana iro rezwi rezwi faira rinogona kugadziriswa zvinobudirira, iwe uchaona bhokisi remeseji rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura iyo yakagadziriswa Shoko faira neMicrosoft Word kana mamwe maapplication anowirirana.
DataNumen Word Repair 3.7 inoburitswa muna Zvita 12, 2020
DataNumen Word Repair 3.5 inoburitswa munaNovember 2nd, 2020
DataNumen Word Repair 3.4 inoburitswa munaNovember 4th, 2019
DataNumen Word Repair 3.3 inoburitswa muna Chivabvu 23, 2019
DataNumen Word Repair 3.2 inoburitswa munaKurume 14th, 2019
DataNumen Word Repair 3.1 inoburitswa muna Ndira 21, 2019
Tsigira Shoko 2019.
Natsiridza iyo yekuisa injini.
DataNumen Word Repair 3.0 inoburitswa muna Gumiguru 25, 2018
Natsiridza kudzoreredzwa kwendima indents.
DataNumen Word Repair 2.9 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 25, 2018
Natsiridza kudzoreredza zvinyorwa.
DataNumen Word Repair 2.8 inoburitswa muna Chikunguru 16th, 2018
Tsigira Shoko reHofisi 365 zvinyorwa.
DataNumen Word Repair 2.7 inoburitswa muna Ndira 18, 2018
Tsigiro yekuwanazve mamwe data.
DataNumen Word Repair 2.6 inoburitswa munaNovember 9th, 2017
Tsigira Windows 10.
Tsigira Hofisi 2016.
DataNumen Word Repair 2.5 inoburitswa muna Chikunguru 3, 2015
DataNumen Word Repair 2.1 yakaburitswa muna Chikunguru 20, 2013
Tsigiro yekuisa pikicha mugwaro rakadzorerwa.
Tsigira mavara eAsia.
DataNumen Word Repair 2.0 inoburitswa muna Chikumi 8, 2013
Tsigira Word 2007, 2010 uye 2013 mafomati.
DataNumen Word Repair 1.1 inoburitswa muna Chikumi 4, 2005
Tsigiro yekugadzirisa zvinyorwa zveMicrosoft Word 2003.
Gadzirisa uye dzorera yakaora Acrobat PDF mafaira.
Gadzirisa uye dzosa yakaora kana kukuvara Microsoft Excel xls, xlw uye xlsx mafaera.